အိုင်ယာလန်နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး အိုင်ယာလန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားအိုင်ယာလန်ရှိနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကနေထိုင်ရာအိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့်များအတွက်န်ဆောင်မှုပေး, အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့် Residency, အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် Residency, အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဒုတိယ Residency, အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် dual Residency, အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်နေထိုင်မှု , အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်မှု၊ အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်မှု၊ အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသား၊ အိုင်ယာလန်ရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဒုတိယ passp အိုင်ယာလန်ရှိ ort အစီအစဉ်များ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒုတိယ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှစ်ခု၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏သံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ အိုင်ယာလန်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ အိုင်ယာလန်ရှိရွှေဗီဇာ၊ အိုင်ယာလန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ အိုင်ယာလန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ အိုင်ယာလန်တွင်ဒုတိယမြောက်ရွှေဗီиза၊ အိုင်ယာလန်တွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်အိုင်ယာလန်ရှိရွှေဗီဇာ၊ အိုင်ယာလန်ရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ အိုင်ယာလန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ အိုင်ယာလန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 200,000
အိုင်ယာလန်သည်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါတို့နှင့်အနီးဆုံးဥရောပနိုင်ငံများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူပင်ဥရောပ၏ကျန်ရှိနေသေးသောဒေသများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သောအချက်ဖြစ်သည်။ ယူကေသည်တစ်နာရီခန့်သာဝေးသည်။ ဘာစီလိုနာသည် ၂ နာရီကြာလေယာဉ်ခရီးစဉ်သာဖြစ်သည်။ ရောမသည်သုံးနာရီသာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်၊ အိုင်ယာလန် မှလွဲ၍ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသာလွန်ထူးကဲသောဌာနချုပ်မရှိပါ။ အိုင်ယာလန်တွင်အလွန်ပြင်းထန်သောလက်နက်ဥပဒေများရှိသည်။ သင်က Homestead တွင်နေထိုင်သည် မှလွဲ၍ သေနတ်တစ်လက်မပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့၏အဆုံး၌သင်ဝယ်ယူထားသောသေနတ်သည်“ သင့်လျော်သောမွေးမြူရေးခြံ” ဖြစ်ရမည်။ ဤအချက်ကသေနတ်ကိုင်ရိုင်းစိုင်းသည့်အရှိန်အဟုန်များလုံးဝနီးပါးမရှိခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကြမ်းတမ်းသောအမှားများသည်အိုင်ယာလန်တွင်နိမ့်ကျနေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အိမ်ပြန်ရန်အမှန်တကယ်ကာကွယ်ထားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်ယာလန်တွင်နေထိုင်သူအားလုံးသည်ဆေးကုသမှုအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီကြသည်။
သင်၏အမြတ်အစွန်းသည်တိကျသောအစွန်းအောက်တွင်ရှိသည်ဟူသောအခွင့်အလမ်းတွင်သင်လက်တွေ့လက်တွေ့အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုလုံးကိုဘာမျှမလိုဘဲလက်တွေ့ကျကျရရှိရန်သင့်အားအရည်အချင်းပြည့်မီသည့်လက်တွေ့ကဒ်တစ်ခုအတွက်သင်ပင်ငွေတောင်းခံလွှာကိုပင်သင်လိုက်နာသည်။ သင်ကဆေးကဒ်ပြားအတွက်သင်ငွေတောင်းခံလွှာကိုမလိုက်လျောနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သူလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကဲ့သို့သောအချို့သောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအတွက်ငွေပေးချေရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်ပြည်သူ့အာဏာပိုင်များကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေးသည်၊ အိုင်ယာလန်သည်ဆရာဝန်သတ်မှတ်ထားသောဆေးဝါးများအတွက်၊ သင်သုံးစွဲရန်လိုအပ်သည့်ငွေပမာဏ၊ ရေရှည်ရောဂါရှိသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်ကိုပင်ပေးသည်၊ ၎င်းသည်သင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသို့မဟုတ်ရှည်လျားသောအခြေအနေရှိပါကသင်၏အသုံးစရိတ်များကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်၊ ကလေးမွေးခြင်း၏လက်တွေ့ကုန်ကျစရိတ်များကိုအထူးထောက်ပံ့သောမိခင်နှင့်မွေးကင်းစကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသားများသည်အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခု၌နေထိုင်သူနှစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံသည်နှစ်ဆနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုရရှိနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအိုင်ယာလန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်သင်၏နေရင်းနိုင်ငံတွင်သင်၏အခွင့်အရေးများကိုစွန့်လွှတ်ရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများပင်ဘဏ္bာရေးဆိုင်ရာချိန်ခွင်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ မှတ်တမ်းတစ်ခုဖွင့်ရန်သင်လိုအပ်သမျှသည်တရားဝင် ID အမျိုးအစား (သင်၏ဗီဇာကဲ့သို့) နှင့်သင်၏တည်နေရာကိုအခြားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်စစ်ဆေးသည်။ ဘဏ်အနည်းငယ်သည်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်ပိုမိုတင်းကြပ်ပြီးလိပ်စာသို့မဟုတ်သင့်မူလနိုင်ငံမှငွေကြေးသမိုင်းကြောင်းအတည်ပြုရန်နှစ်မျိုးလိုအပ်သည်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကအိုင်ယာလန်မှာငွေရေးကြေးရေးအကန့်အသတ်ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဖွင့်လို့မရဘူး။
အိုင်ယာလန်ရှိအခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပုံမှန်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျိုးနွံမှုမရှိသော်လည်း၊ အခြားသောဥရောပနိုင်ငံများကဲ့သို့ဗြိတိန်နှင့်ဆွီဒင်တို့ကဲ့သို့ထိပ်ဆုံးထက်မကျော်လွန်ပါ။ တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည့်နိုင်ငံခြားသားများသည်တစ်တန်လျှင်ငွေတစ်ချောင်းဖယ်ထားရန်မမျှော်လင့်သင့်ပါ။ ထို့အပြင်အသုံးစရိတ်အနည်းဆုံးအတွက်ကြီးမားသောဘဝပုံစံကိုသူတို့မမျှော်လင့်သင့်ပါ။ အရင်းအမြစ်များအားလုံးလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲထိရောက်စွာအသက်ရှင်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ပိုပြီးမာစတာအပေါ် Peruse ။ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိနေထိုင်မှုစရိတ်သည်သင်နေထိုင်ရာအပေါ်အနည်းငယ်သာမှီခိုနေရလိမ့်မည်။ အလားတူပင်၊ မည်သည့်နိုင်ငံနှင့်မဆိုအိုင်ယာလန်၏မြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတွင်နေထိုင်သောဥပမာ - Dublin၊ Limerick သို့မဟုတ် Galway သည် ပိုမို၍ အကုန်အကျများလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤသည်သည်မြို့ပြဒေသများ၌သင်တည်းခိုရန်ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများသည်မြို့စွန်တွင်နေထိုင်ခြင်းဖြင့်ဤကုန်ကျစရိတ်ကိုလုံး ၀ လျှော့ချနိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတ်တိုင်မှဝေးသောနေရာတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်ပင်စိမ်းလန်းကျွန်း၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်အတွက်လေးစားဖွယ်ကောင်းသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည့်အတိုင်းအိုင်ယာလန်သည်ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အဓိကကုန်ပစ္စည်းများ၊ အရက်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကိုတင်သွင်းသင့်သည်။ အိုင်ယာလန်အားလုံးသည်မယုံနိုင်လောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေနပ်မှုကိုပေးသော်ငြားလည်းမြို့ပြaရိယာအချို့သည်အထူးသဖြင့်လူဟောင်းများကြားတွင်အဓိကကျသောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်အချို့သည်၎င်းတို့သည်မြို့ပြဒေသများဖြစ်သည်ဟုအလန့်တကြားသိထားကြသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသွားလာရန်၊ တစ်နိုင်ငံလုံးဖြတ်သန်းသွားလာရန်နှင့်ပြင်ပလူတစ် ဦး ချင်းစီကိုညှိနှိုင်းရန်ပိုမိုကြီးမားသောကမ္ဘာအနှံ့ကွန်ယက်ကိုပေးသည်။ ဤရွေ့ကားမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းသည်လည်းဟောင်းများအိုင်းရစ်ယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခြွင်းချက်နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပေးခြင်း, သူတို့ရဲ့လုံ့လရှိသူလူမှုရေးနှင့်စကားရပ်မြင်ကွင်းများများအတွက်အလားတူပင်မဖြစ်ကြသည်။ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်အများပြည်သူပညာသင်ကြားခြင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အုပ်ထိန်းသူများသည် ၀ တ်စုံများ၊ မုန့်များနှင့်ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများအတွက်သာပေးချေရန်လိုအပ်သည်။ ဤကုန်ကျစရိတ်များသည်ကျောင်းနှင့်သင်သုံးစွဲလိုသည့်အရာအပေါ် ပြောင်းလဲ၍ ကျောင်းအပေါ်မှီခိုလိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျောင်းတွင်ညွှန်ကြားချက်သည်အိုင်ယာလန်ဒေသခံများအတွက်ပညာရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည်။ နှစ်စဉ်ပညာရေးကုန်ကျစရိတ်သည်ကျောင်းနှင့်သင်၏ကလေးငယ်အသက်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်ပုံမှန်အုပ်ထိန်းသူများသည်ကလေးတစ် ဦး လျှင်ယူရို ၁၀၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၁၀၀၀) ခန့်သုံးစွဲရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါ၊ သင်၏အိမ်အသစ်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်လူမှုရေးစံနှုန်းများနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုနားလည်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ လူမှုရေးကန့်သတ်ချက်များကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းကသင့်အတွက်အရှက်ရစေသောအခြေအနေဖြစ်စေနိုင်သည်၊ အဆိုးမြင်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ပင်အလွန်ဆိုးဝါးသောရလဒ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ဥပမာအားဖြင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်လူမှုရေးအမှားများကိုတင်ပြခြင်းသည်အကျဉ်းထောင်သို့မဟုတ်ထုတ်ယူခြင်းကဲ့သို့တကယ့်အဖြစ်မှန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့်အချက်များအရတိုင်းပြည်၏လူမှုရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာဆန္ဒများကိုသင်ပိုမိုထိရောက်စွာသင်၏အိုင်ယာလန်အိမ်အသစ်တွင်ပိုမိုထိရောက်စွာပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်ရည်မှန်းချက်ဖြင့်သိရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ အိုင်ယာလန်
အိုင်ယာလန်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အချိန် processing
PR စနစ်နှင့်အတူ5နှစ်အကြာတွင်
လူဝင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဘွန်း ယူရို ၁ သန်းတန်ငွေချေးစာချုပ်တွင် ၀% ရာခိုင်နှုန်းအတိုးနှုန်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်
စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ယူရို ၅၀၀၀၀၀ ကိုအိုင်ယာလန်လုပ်ငန်းတွင် ၃ နှစ်ကြာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများ ယူရို ၅၀၀,၀၀၀ သည်အတည်ပြုထားသောရန်ပုံငွေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါလင့်ခ်ကိုကြည့်ပါ။
အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Trusts အနည်းဆုံးယူရို ၂ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အိုင်ယာလန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဝင်သောအိုင်းရစ် REIT ၌တည်၏။ ယူရို ၂ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အိုင်ယာလန် REITs အမျိုးမျိုးတွင်ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
ရောနှောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အနည်းဆုံးယူရို ၄၅၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိလူနေအိမ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပြောင်းရွှေ့လာသောလူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှောင်ကြိုးသို့ယူရို ၅၀၀,၀၀၀ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အနည်းဆုံးယူရို ၉၅၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ နှောင်ကြိုးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆင့်ကိုဝယ်ယူထားသောပစ္စည်း၏တန်ဖိုးနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိတော့ပါ။
ပဒေသာပင်များ လူတစ် ဦး ချင်းစီမှအလှူငွေယူရို ၅၀၀,၀၀၀ (ယူရို ၄၀၀၀၀၀ (၅ ခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဦး ကသင့်လျော်သောစီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်၎င်းတို့၏အလှူငွေကိုစုဆောင်းထားခြင်း) ။
အဘယ်ကြောင့်အိုင်ယာလန်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားကြဖို့
အိုင်ယာလန်အီးယူအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီးဖော်ရွေသောစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည့်အတွက်ဤတိုင်းပြည်သည်ပြန်လည်နေရာချထားလိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသည့်ရွှေနေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်သည်လျှောက်ထားသူများနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအားအိုင်ယာလန်တွင်နေထိုင်ရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတောင်းဆိုခြင်းမပြုသော်လည်းအကန့်အသတ်မရှိသက်တမ်းတိုးနိုင်သည့်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုထားသည်။ နေထိုင်သူများသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအပါအ ၀ င်အဖြစ်များသည့်ခရီးသွားAreaရိယာ၌အကန့်အသတ်မရှိဗီဇာမဲ့ခရီးသွားလာကြသည်။
သင်၏ရင်းနှီးသောမိသားစုဝင်များသည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုဖြည့်ဆည်းသောအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏတိုးစရာမလိုဘဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက် / လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများနှင့်အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းကလေးများသည်သင့်ကို (အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားများ) ပေါ်တွင်တစ်ကိုယ်ရေနှင့်ငွေရေးကြေးရေးအရမှီခိုနေပါကပါဝင်သည်။
အိုင်ယာလန်တွင်အတည်ပြုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသဘောတူလက်ခံသော EEA မဟုတ်သူများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများသည် Immigrant Investor Program ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ခွင့်ပြုထားသည့်လျှောက်ထားသူများကိုအိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားနိုင်ငံဝင်ခွင့်ဗီဇာများစွာဖြင့်နိုင်ငံတော်သို့ ၀ င်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ခွင့်ပြုချက်ကိုကန ဦး ၂ နှစ်သက်တမ်းသက်တမ်းတိုးပြီးနောက် ၃ နှစ်ထပ်မံသက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်သည်ပထမ ၅ နှစ်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆက်လက်မထားရှိဘဲထပ်မံသက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အိုင်ယာလန်အတွက်ကောင်းသော၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်ကောင်းမွန်ရမည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်ရန်ပုံငွေများကိုတရားဝင် ၀ ယ်ယူသူကပိုင်ဆိုင်ရမည်။
လျှောက်လွှာများတွင်အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ရန်ပုံငွေအထောက်အထား၊ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်အထောက်အထား၊ ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်ကြောင်းအထောက်အထားနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာသန့်ရှင်းမှုရှိရမည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အိုင်ယာလန်တွင်နေထိုင်ရန်ရွေးချယ်စရာ ၃ ခုရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀ လှူဒါန်းရန်မဖြစ်နိုင်သည့်ပရဟိတအလှူဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်သင်အိုင်းရစ်ရှ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို (၃) နှစ်ကြာထိန်းသိမ်းထားရမည်။
တတိယအနေဖြင့်သင်သည်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်မှုအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ သန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်လိုင်းထောက်ခံမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် အိုင်ယာလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ အိုင်ယာလန်အတွက် အိုင်ယာလန်ရှိဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုအိုင်ယာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ အိုင်ယာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အိုင်ယာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်မှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သက်သက်သာသာသို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ အိုင်ယာလန်မှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ အိုင်ယာလန်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ အိုင်ယာလန်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်များစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်အိုင်ယာလန်အဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ အိုင်ယာလန်အတွက်, အိုင်ယာလန်အတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်အိုင်ယာလန်များအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ
အိုင်ယာလန်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသား ၃၁ နိုင်ငံမှအိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
အိုင်ယာလန်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
အိုင်ယာလန်မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
အိုင်ယာလန်ရှိနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
အိုင်ယာလန်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
အိုင်ယာလန်မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
အိုင်ယာလန်ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကအိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်၎င်းတို့နေထိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှထွက်ခွာလိုသောအခါတိုင်းအိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အိုင်ယာလန်ရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်သူများနှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာအိုင်ယာလန်ရှိကောင်းသောနေရာများတွင်သာအကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဖြစ်သည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်အိုင်ယာလန် Residency
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက်အိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ အိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residence ကိုအိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိ Residence Permit ရရှိရန်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်ပယ်လ်အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည်အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင့်အားမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
အိုင်ယာလန်ရှိအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများက Residency ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် အိုင်ယာလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်များဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် အိုင်ယာလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် အိုင်ယာလန်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်သို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ၏စက်မှုဆိုင်ရာထောက်လှမ်းခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် အိုင်ယာလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် အိုင်ယာလန်တွင်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် အိုင်ယာလန်အတွက် အိုင်ယာလန်ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အိုင်ယာလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက အိုင်ယာလန်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် အိုင်ယာလန်အတွက်ကုန်သွယ်မှု၊ အိုင်ယာလန်တွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောအိုင်ယာလန်နိုင်ငံသားများအတွက်ထောက်ပံ့မှုကိုမရပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် အိုင်ယာလန်အတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု အိုင်ယာလန်အတွက် အိုင်ယာလန်ရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက အိုင်ယာလန် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် အိုင်ယာလန်အတွက်ရှေ့ရပျ အိုင်ယာလန်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမပံ့ပိုးပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်အိုင်ယာလန်နှင့် KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားသော်လည်းလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အိုင်ယာလန်အာဏာပိုင်များကငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အိုင်ယာလန်၏ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်အိုင်ယာလန်အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုအိုင်ယာလန်သို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် Dual Residency နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်ဖောက်သည်များပံ့ပိုးမှုအိုင်ယာလန်အတွက်ဥပဒေရေးရာအေးဂျင့်များအားဖြင့်အတွေ့အကြုံ Residency ။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက်သင်၏ Residency မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်အိုင်ယာလန်အတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
Residency တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးအိုင်ယာလန်အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။
အမှု၌၊ အိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံ ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
အိုင်ယာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်
နေထိုင်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုအိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ အိုင်ယာလန်အတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ အိုင်ယာလန်အတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်အိုင်ယာလန်တွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူအိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အိုင်ယာလန်အတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ အိုင်ယာလန်တွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများက Residency မှလွဲ၍ အိုင်ယာလန်တွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ အိုင်ယာလန်နှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်အိုင်ယာလန်အတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်သင်ရှာမရနိုင်ပါ။
မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်စေရန်အတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်အိုင်ယာလန်နှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ Residency ကိုကျော်လွန်သောလမ်းကိုထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ စျေးသက်သာသည်။ )
အိုင်ယာလန်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလိုအပ်လိမ့်မည် အိုင်ယာလန်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် အိုင်ယာလန်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဘဏ်အကောင့်လည်းရှိတယ်၊ ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်တွေလည်းကူညီနိုင်တယ်။
Incase သင်အဘို့, အိုင်ယာလန်အတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် အိုင်ယာလန်အတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် အိုင်ယာလန်ရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် (သို့) crypto ဖြေရှင်းချက်များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သင်အစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အိုင်ယာလန် အိုင်ယာလန်ရှိလက်ရှိစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် အိုင်ယာလန်အတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
အိုင်ယာလန်ရှိ HR န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ အိုင်ယာလန်အတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် အိုင်ယာလန်အတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အိုင်ယာလန်အတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
အိုင်ယာလန်အတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ အိုင်ယာလန်များအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, အိုင်ယာလန်အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
အိုင်ယာလန်ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
အိုင်ယာလန်အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
အိုင်ယာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အိုင်ယာလန်.
အိုင်ယာလန်အတွက် Web ကိုဒီဇိုင်း
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အိုင်ယာလန်အတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
အိုင်ယာလန်အတွက် App ကိုဖွံ့ဖြိုးရေး
အိုင်ယာလန်အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အိုင်ယာလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ အိုင်ယာလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်အိုင်ယာလန်တွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ အိုင်ယာလန်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးအိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသည်။
အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency ကသင့်ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်အိုင်ယာလန်အတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်အိုင်ယာလန်သို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်သို့သွားရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကအိုင်ယာလန်ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးအိုင်ယာလန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပလီကေးရှင်းကိုတရားဝင်ဖြစ်စေတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
အိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုအိုင်ယာလန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ အိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားသည်။ အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်၊ အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်၌တည်၏။
အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်မှု | အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်
အိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်ဖြင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအကောင်းဆုံးနှင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားပါ။ အိုင်ယာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ | အိုင်ယာလန်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ အိုင်ယာလန်ရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ အိုင်ယာလန်ရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ အိုင်ယာလန်အတွက်စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | အိုင်ယာလန်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအိုင်ယာလန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အိုင်ယာလန်သို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ အိုင်ယာလန်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက်နောက်ထပ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု | အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
အိုင်ယာလန်ရှိရွှေဗီဇာကိုအိုင်ယာလန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်နေထိုင်ခြင်းခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အိုင်ယာလန်သို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ အိုင်ယာလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
အိုင်ယာလန်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | အိုင်ယာလန်ရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ အိုင်ယာလန်ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ အိုင်ယာလန်ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ အိုင်ယာလန်အတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
Residency အတွက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာယူရို ၂၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက် Residency အတွက်ဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်, အိုင်ယာလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်အိုင်ယာလန်ရှိအေးဂျင့်များသည်အိုင်ယာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
အိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်သည်၊ အိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးရသည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များများစွာပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုနေထိုင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှအိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှအိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှအိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှအိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှအိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှအိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှအိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှအိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှအိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အိန္ဒိယမှအိုင်ယာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း ယူအေအီးမှအိုင်ယာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု အိုင်ယာလန်အတွက်
အိုင်ယာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
ဝါရှင်တန်ပို့စ် - အရှေ့အလယ်ပိုင်း
Al-Monitor - အီရန်
ရှေ့တန်း - တီဟီရန်ဗျူရို
ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက် ၂၂၃၁ (၂၀၁၅) ၏နောက်ခံသမိုင်း
Pars Times - အီရန်နျူကလီးယားအရင်းအမြစ်များ
ပြည်နယ် ဦး စီးဌာန - မပြန့်ပွားရေးအရေးယူပိတ်ဆို့မှု
အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျု - အီရန် Primer
Monterey Institute - မပြန့်ပွားရေးလေ့လာရေးစင်တာ
နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကောင်စီ - ပြန့်ပွား
ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ - World Fact Book, Iran
နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ - အီရန်
သိပ္ပံနှင့်နိုင်ငံတကာရေးရာ Belfer စင်တာ - အီရန်အရေးကိစ္စ
Nonproliferation Policy ပညာရေးစင်တာ
လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးအသင်း - အီရန်နိုင်ငံအရင်းအမြစ်များ
Woodrow Wilson အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရှင်များစင်တာ - အရှေ့အလယ်ပိုင်းအစီအစဉ်
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမူဝါဒဝါရှင်တန် - အီရန်
IDC Herzliya GLORIA စင်တာ - အီရန်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေး - အီရန်
Project Alpha၊ King's College London - Alpha on Iran
ရေဒီယိုအခမဲ့ဥရောပ / ရေဒီယိုလွတ်လပ်မှု - အီရန်
လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်မပြန့်ပွားရေးစင်တာ - အီရန်
စီးပွားရေးပညာရှင် - အီရန်
ဘဏ္theာရေးဌာန - နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး၊ အီရန်နိုင်ငံပိတ်ဆို့မှု
New York Times - အီရန်
အတ္တလန္တိတ်ကောင်စီ - အီရန်၏အနာဂတ်
OPCW အချက်အလက်စာရွက် - ဓာတုလက်နက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Hazard ဘလော့၏ Nukes
အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်များအဖွဲ့ချုပ် (FAS) - အီရန်နျူကလီးယားအစီအစဉ်
နျူကလီးယားပေးသွင်း Group မှ
link ကိုမှ အိုင်ယာလန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , အိုင်ယာလန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်